राजनीति Archives - Harekpal
'हत्या आरोपित' सापकोटा सभामुख प्रस्तावित ?
अभिव्यक्ती स्वतन्त्रा र प्रदेश स्वतन्त्रताका लागी धनकुटा कांग्रेसले पठायो ज्ञापन पत्र
नेपालको विकासका सन्दर्भमा एमसीसी मुटु नै हो : सभापति देउवा
काठमाडौं, ७ माघ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेता कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता बनाएको छ । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकपछि पार्टी कमिटीमा जारी भएको ‘विशेष परिपत्र ७’ अनुसार पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अनिवार्य आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भएको छ । नेकपाले जारी गरेको आचारसंहितामा छोराछोरीको विवाहलाई मितव्ययी बनाउनेदेखि आफ्नै कमाईबाट पार्टीमा अनिवार्य लेबी बुझाउनुपर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको […]
‘हत्या आरोपित’ सापकोटा सभामुख प्रस्तावित ?
काठमाडौं, ७ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुखमा ज्यान मुद्दाका किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई प्रस्ताव गरेको छ। सापकोटाविरुद्ध १० वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सोही जिल्लाका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। किटानी जाहेरीसँगै सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन आठ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको […]
धनकुटा ५ माघ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा र प्रदेश स्वतन्त्रता खतरामा पर्न लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेस धनकुटाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा मार्फत नेपाल सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पठाएको छ । जवरजस्ती ढंगले सरकारले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक बोल्न र लेख्न नदिनका लागी संवन्धित समितबाट सूचना तथा संचार प्रविधि ऐन जवरजस्ती पारित गर्दै प्रतिनिधि सभामा लान लागेकोले […]
दाङ, ५ माघ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै यसमा पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल प्रेस युनियन दाङले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले एमसीसीमा कांंग्रेसको पूर्ण समर्थनमा रहेको बताउँदै जसरी पनि संसद्‍बाट पारित हुने बताए । देउवाले एमसीसी यो पारित भए विद्युत व्यापार र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण […]
सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई देशभरबाट कांग्रेसको विरोध पत्र
काठमाडौं, ५ माघ । सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई देशभरबाट विरोध पत्र पठाएको छ । संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि र विशेष सेवा विधेयकको विरोध गर्दै कांग्रेसले देशभरबाट विरोध पत्र पठाएको हो । हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोध पत्र पठाएका हुन् । अन्य […]
नेकपामा सकस : सभामुखको टुंगो अझै लागेन
काठमाडौं, ५ माघ । सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउन नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल जारी छ। नेकपाले उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसक्दा लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। भोलि बस्नेगरी पछिल्लो पटक पुस २७ गते बैठक स्थगित भएपछि नेकपामा पटपटक छलफल भए पनि उम्मेदवार टुंगो लागेको छैन् । आज […]
एमसीसी संझौतामा अमेरीका सेना ल्याउने भन्ने छैन् : नेता पौडेल
रामेछाप ५ माघ । नेपाली काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य प्रदिप पौडेलले एमसीसी संझौतामा अमेरीकी सेना ल्याउने भन्ने कुरा अनर्गल प्रचार मात्र रहेको बताएका छन् । काग्रेसको पालामा आएको एमसिसि संझौतामानै नभएको कुरालाई उचालेर बाहिर आएका जति पनि कुराहरु छन् ति कुराहरु एमसिसि विरुद्ध कुरा गर्नै जमातले मात्र गर्नै गरेको भन्दै त्यसमा नेपाली काँग्रेसको समर्थन रहेको बताएका […]
सूचना प्रविधि विधेयककाे विराेधमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशैभरिबाट विराेधपत्र बुझाउँदै
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाली काङ्ग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा आज देशैभरिको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विरोधपत्र बुझाउने भएको छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विधेयक सच्याउन माग गर्दै सरकारलाई विरोधपत्र बुझाइने काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनु भयो । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, विधेयकका […]
काठमाडौं, ५ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनरक्षक विधि मानिएको डायलाइसिस प्रक्रिया जारी राख्दै मुलुकका महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्य गर्दै आएका छन् । १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको नियमित डायलाइसिस हुँदै आए पनि महत्वपूर्ण बैठक र प्रशासनिक कामलाई अड्काएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयदेखि पार्टीका महŒवपूर्ण बैठकमा समेत सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीले […]